Laticreteမှကျောက်ပြား၊ကြွေပြားနှင့်ကျောက် အချောသတ်များအား ဆန်းသစ်ပြီးရေရှည်ခံသော တပ်ဆင်မှုများဖြစ်စေရန်အတွက်နည်းပညာသစ်များကို
LATICRETE warranties cover any suitable tile or stone manufacturer's product, allowing you to select the appropriate product and finish you desire for your project.
LATICRETE - MYANBUILD 2013 သို့ ဖိတ်ကြားလွှာ
ချစ်ခင်လေးစားရပါသော တာဝန်ရှိ လူကြီးမင်း ခင်ဗျား ၂၆ရက် မှ ၂၉ရက် နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၃၊ ရန်ကုန်မြို့ တပ်မတော် ပြခန်းတွင် ကျင်းပမည့် MyanBuild (MYANBUILD 2013 – the International Building & Construction Industry Exhibition & Conference (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဆောက်အဦး နှင့် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်း ပြပွဲနှင့် ညီလာခံ) မှာရှိ သော သို့ ကျွန်ုပ်တို့၏ LATICRETE ပြခန်း သို့ ကြွရောက်ရန် ဖိတ်ခေါ်ခွင့်ရသည့် အတွက် အလွန်ကြည်နူး ၀မ်းမြောက်မိပါသည်။
LATICRETE isaworld-wide manufacturer of tile and stone installation systems. Provide the technology, products and experience to make innovative materials used in Pool, Spa and Fountain system, Façade system, Plaza & Deck system, Residential, Commercial and Industrial Floor system applications. Architecturally specified and professionally endorsed by installers. LATICRETE offersadedication to quality and innovation that results in Globally Proven Construction Solution.
LATICRETE သည် ကြွေပြားနှင့် ကျောက်ပြား တပ်ဆင်မှု နည်းစနစ်များ၏ ကမ္ဘာအနှံ့ပျံ့နှံ့သော ထုတ်လုပ် ရောင်းချသူ ဖြစ်ပါသည်။ နှစ်ပေါင်း ၅၀ကျော်ကြာ LATICRETE သည် လူနေရပ်ကွက်၊ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်း နှင့် စက်ရုံး အသုံးပြုခြင်းများတွင် အသုံးပြုသည့် ပစ္စည်းများ ဆန်းသစ်စေရန် နည်းပညာ၊ ထုတ်ကုန်များနှင့် အတွေ့အကြုံ ကို ပေးအပ်ပါသည်။